Usosayensi waseKZN enkundleni noNaomi Campbell | Isolezwe
Usosayensi waseKZN enkundleni noNaomi Campbell
intandokazi / 28 February 2019, 11:09am / BONISWA MOHALE
UNKSZ Senamile Masango ufuna ukuvula ama-laboratory ezindaweni zasemakhaya ukuze abafundi bayiphase kahle iSayensi
USWELE amaphiko okundiza usosayensi waKwaNongoma uNksz Senamile Masango, ozoshiyelana inkundla nomkhangisi wengqephu ongaconsi phansi kubathandi bemfashini, uNaomi Campbell kweminye yemicimbi ezokuba seThekwini kule mpelasonto.
UNksz Masango omatasa neziqu zePHD kwiNuclear Physics eNyuvesi yaseWestern Cape, waqopha umlando eba ngowesifazane wokuqala ukuhola ithimba elalicwaninga ngenuzi ngo-2017.
UNksz Masango uthe umkhonzile uNaomi Campbell ngoba ngaphandle kokuthi uwumkhangisi wengqephu kodwa unezinhlelo eziningi zokusiza i-Afrika.
“Ngiwumuntu ofuna ukuthuthukisa izinga lesayensi eNingizimu Afrika nase-Afrika yonkana ngoba abafundi bethu abenzi kahle ezifundweni zesayensi. Lokhu kuzosilimaza ngokuhamba kwesikhathi ngoba kukhulunywa ngeFourth Industrial Revolution lapho imisebenzi isizogxila kakhulu kwezobuchwepheshe,” kusho uNksz Masango.
Uthe unenhlangano esiza umphakathi iSenamile Masango Foundation egqugquzeka abantu abasha ukuthi bathande izifundo zesayensi, ezezibalo nezokubuchwepheshe.
UFUNA ukukhuphula izinga lokuphaswa kweSayensi eNingizimu Afrika nase-Afrika yonkana ngoba okwamanje ayiphaswa kahle ngenxa yokungabi bikho kwezinsiza kusebenza Izithombe: ZITHUNYELWE
“Inhloso yami wukwakha ama-laboratory ezindaweni zasemakhaya ngoba izingane azenzi kahle kulesi sifundo ngoba azinawo ama-laboratory. Ngifuna kube nama-laboratory ezindaweni zasemakhaya ikakhulukazi KwaZulu-Natal, Eastern Cape naseLimpopo,” kusho uNksz Masango.
Ugqugquzele abesifazane ukuthi bangadumi ngokupheka ukudla okwehla esiphundu kuphela kodwa bangenise emikhakheni wezimali ukuze bafukule umnotho.
Ubaluleke ngokuthi bangasabi nokuzivulela amabhizinisi ukuze kuhlomule umphakathi.